Varume Vari Kupomerwa Mhosva yeKuuraya Musoja kuChivhu Vanonzi Vapfurwa Vakafa neMauto neMapurisa
Varume vaviri vakapfura masoja maviri mumwe wacho akafa muChivhu nezuro
vapfurwa vakafa nhasi kuNyazvidzi pedyo nekuBuhera. Nunurai Jena
anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava, avo vasati vave kuzivikanwa mazita avo vapfurwa nemasoja achibatsirana nemapurisa. Mutauriri wemapurisa Asst Comm Paul Nyathi vabvuma kuti vaviri ava vapfurwa vose vakafa uye pfuti dzavakatora dzawanikwa vachinadzo.
Masoja maviri aya akapfurwa pane imwe kamba yemapurisa diki pedyo neChicken Inn kuChivhu. Kamba yemapurisa iyi ine mauto nemapurisa ari kubatsirana kuona kuti vanhu vatevedzera here kurudziro yekuti vagare mudzimba senzira yekutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
VaNyathi vanoti munhu akapfura mauto aya akapinda pakamba apa ndokukumbira mumwe muuto kuti vataura panze ndokuzodzoka mukamba vose achibva apfura nekuuraya mumwe muuto mumwe akakuvara zvakaipisisa asati atiza nemumwe wake.
Kupfurwa kwemasoja uku kuri kuuya apo hukama hwevanhu nemasoja husina kumira zvakanaka nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kupomerwa mamwe masoja munyika.
Makore maviri apera mugore ra2018 muna Nyamavhuvhu vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevanofungidzirwa kuti masoja vachiratidzira asi hapana musoja akasungwa kunyange pakaitwa ongororo yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa VaKgalema Mothlanthe. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vataura neStudio 7 vati kunyangwe vanhu vakanetsana hapafanire kudeurwa ropa sezvo paine matare anofanira kutonga nyaya dzose.
Gweta uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu VaDzikamai Bere vanoti hukama hwevanhu nemasoja hauna kunaka zvachose vachiti hukama uhu hunofanirwa kugadziriswa kuti vanhu vakwanise kuyamura mapurisa nemasoja mubasa ravo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance VaClifford Hlatswayo vanoti masoja, mapurisa nevanhu vanofanirwa kuremekedzana kuti nyika ifambire mberi zvakanaka.
Mamwe magweta ataura neStudio 7 ati kufa kwevanhu vakuraya muuto uku kuchapa kuti nyika isazive kuti chii chaizvo chakapa kuti padeuke ropa asi vachiti zvinonetsa kubata vanhu vanenge vachipomerwa mhosva yekuuraya uye vaine pfuti.
Vanhu nemasoja vakamboita hukama hwakasimba apo masoja akabatsira kupidigura vaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti masoja haafanire kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvinokurudzirwa nebumbiro remitemo. Nezure wakare vamwe vanhu vakaonekwa vakatakura nekumhanyisa muuto ainge akuvara kuchipatara.